အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Mac ဂိမ်း ၂၀ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Mac ဂိမ်း ၂၀
Ignatius ခန်းမ | | မက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
Mac operating system, macOS သည် Apple ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဂိမ်းကစားရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ၊ Windows သည်ယနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားကိုမဆိုလက်တွေ့ခံစားပါ.
ဒါပေမယ့်ဂိမ်းတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအရမင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကသိပ်မမြင့်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းကြည့်ရင်ငါတို့ကအခကြေးငွေနဲ့အခမဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသခြင်းကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည် Mac အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂိမ်းများ
2 Legends ၏လိဂ်
3 Exile များ၏လမ်းကြောင်းကို
5 Starcraft ၂
6 ဟာ dota 2
7 TTD ကိုဖွင့်ပါ
8 Wesnoth အဘို့စစ်တိုက်
9 Doki Doki စာပေကလပ်!
10 တစ်သံမဏိက Sky အောက်ဖက်
11 tank Blitz ၏ကမ္ဘာ့ဖလား
13 အသက်ကြီးကျမ်းလိပ် Legends
15 Frags ၏လက်သီး
16 အဖွဲ့ခံတပ် 2
19 Epic Solitaire
20 စူပါ Stickman ဂေါက်သီး 3
Counter-Strike သည် ၉၀ နှောင်းပိုင်းများတွင်ကျင်းပခဲ့သော LAN အစည်းအဝေးအများစု၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းကိုဖန်တီးရန်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အပြိုင်အဆိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင်ကွင်း FPS (First Person Shooter) အမျိုးအစားအတွင်း
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Counter-Strike: Global Offensive ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၊ စျေးကွက်တွင် ၁၉ နှစ်ကြာရှိခဲ့သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်ကောင်အသစ်များ၊ လက်နက်များ၊ မြေပုံများနှင့်ကစားနည်း သေနတ်သမားလောကမှာအကိုးအကားဖြစ်လာတယ်။
CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) ကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အခမဲ့ download လုပ်ပါ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖြန့်ချိခဲ့သောစစ်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုနှင့် Danger Zone တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒီခေါင်းစဉ် ဒါဟာလိုအပ်ပါတယ် OS 10.11, 2,0 GHz Intel Core Duo processor,2GB RAM, ATI Radeon HD 2400, NVIDIA 8600M or better, 15 GB hard disk space ။ ၎င်းမှတဆင့်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည် ရနှေးငှေ့.
League of Legends သည်တစ်ခုဖြစ်သည် လူကြိုက်အများဆုံး MOBA ဂိမ်းများ ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများကိုတိုက်ပါ၊ သို့သော်သတိပေးပါ၊ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးအပြိုင်အဆိုင်များသောဂိမ်းဖြစ်သည်။
League of Legends တွင်သင်သည်အစောင့်တပ်စခန်းတစ်ခု၏နှလုံးသား၌ရှိသောဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့၏အဆက်အစပ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ တိုက်ပွဲများ သူတို့သည်မိနစ် ၂၀ မှ ၆၀ အတွင်းကြာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်များသည်ကစားပွဲတစ်ခုစီတစ်လျှောက်အတွေ့အကြုံရရှိစေသည် ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်သုံးနိုင်သောရွှေကိုရယူပါ မင်းရဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ဂိမ်းထဲမှာ
သငျသညျထက်ပိုရှိသည် မင်းရဲ့လက်မှာချန်ပီယံ ၁၀၀၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ရန်သင်ငွေသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းအားကစားသမားများအားမပေးသောသို့မဟုတ်အားသာချက်မပေးသောအလှကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
League of Legendes များလိုအပ်သည် OS 10.10,3GHz processor (SSE2 အထောက်အပံ့ဖြင့်)၊2GB RAM (4 GB ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံသည်)၊ NVIDIA GeForce 8600M GT, ATI Radeon HD 2600 သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ hard disk space5GB နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်.
လူအများကယင်းကိုပြောဆိုကြသည် Path of Exile သည် Diablo3ထက်ပိုကောင်းသည်ဒါပေမယ့်အရောင်အရသာအတွက် Path of Exile သည်မှောင်မိုက်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတွင်သတ်မှတ်ထားသောအက်ရှင် RPG တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ကစားဟန်နှင့်အလှအပသည် Diablo3နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း Path of Exile သည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ညွှန်ပြသည်။ visceral တိုက်ခိုက်ရေး, အစွမ်းထက်ပစ္စည်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ကြိုက် ဇာတ်ကောင်များ၏။
Exile များ၏လမ်းကြောင်းကို Diablo2၏နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုနှင့်ပိုတူသည် Diablo3ထက် Diablo3သည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားသူများအတွက်ပိုမို ဦး တည်နေသော်လည်း Path of Exile သည်ပိုမိုတောင်းဆိုရန်၊ အပြစ်ပေးရန်နှင့်ရှုပ်ထွေးသည်။
အ Path of Exile လိုအပ်ချက် ၎င်းတို့မှာ OS 10.13,7GHz Intel Core i2,6 processor, 8 GB RAM, ATI Radeon Pro 450,40 GB hard disk space ဖြစ်ပြီး၎င်းမှတဆင့်သင် download လုပ်နိုင်သည်။ ရနှေးငှေ့.
Hearthstone သည်သင်ဖြစ်သည် Warcraft စကြဝာကို အခြေခံ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်ကဒ်ဂိမ်းမရ။ Hearthstone သည်မင်းထင်တာထက်အများကြီးပိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုစီတွင်သင်၏စိတ်ကြိုက် ၃၀ ကဒ်ကုန်းပတ်မှ (ဘယ်သူအရင်သွားလဲပေါ်မူတည်) ကတ်သုံးလေးကတ်ဆွဲပါ။
အဲဒီမှာ ကဒ်အမျိုးမျိုး (လက်နက်၊ စာလုံးပေါင်းများနှင့်သတ္တဝါများ) နှင့်သူသည်သင်နှင့်တူအောင်မလုပ်မီသင်၏ပြိုင်ဘက်၏ကျန်းမာရေးကိုယိုယွင်းစေသည်။
Hearthstone ဖြစ်သည် ကစားသမားသစ်များအတွက်သင်ယူရန်လွယ်ကူသည် သင်စက်ပြင်ကိုသင်ယူသည်နှင့်အလွန်စွဲလမ်းသည်။ အသစ်များလည်းအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့များလည်းတိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်။
ဒီခေါင်းစဉ် ဒါဟာလိုအပ်ပါတယ် OS 10.12, Intel Core2Duo processor, RAM2GB, NVIDIA GeForce 8600M GT, ATI Radeon HD 2600 Pro, hard disk space3GB နှင့် web မှတဆင့်ရနိုင်သည်။ မိုးပွင့်မုန်တိုင်း.
Starcraft2သည်တစ်ခုဖြစ်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟာဗျူဟာဂိမ်း Blizzard မှ developer Starcarft နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည် real-time နည်းဗျူဟာဂိမ်းတွင်သင်မြင်ဖူးသည်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပိုမြန်သည်။ သင်ဤခေါင်းစဉ်ကိုခံစားလိုလျှင်ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ကိုသုံးရန်လိုသည်။
ဤခေါင်းစဉ်၏ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုယူရို ၅၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည် ငါတို့ကိုအခမဲ့ဗားရှင်းပေးထားပါတယ် function များစွာနဲ့
Starcraft2၏အခမဲ့ဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် Wings of Liberty လှုပ်ရှားမှုအပြည့်အစုံအဆင့်နှင့်မကစားရသေးသည့်ကစားသူအများအပြားနှင့်ရနိုင်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတပ်မှူးအားလုံး
တိုတိုပြောရရင်မင်းကမ်ပိန်းအားလုံးကိုသော့ဖွင့်ဖို့ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံကို ၀ ယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာအမြဲရှိတယ်။ Starcraft2လိုအပ်သည် OS 10.12, Intel Core2Duo processor, RAM4GB, NVIDIA GeForce GT 640M, ATI Radeon HD 4670 သို့မဟုတ်ပိုကောင်း၊ hard disk space 30 GB
Starcraft2ကို download လုပ်ရန်၊ သင်၏ page သို့သွားပါ မိုးပွင့်မုန်တိုင်း.
ဟာ dota 2
ဟာ dota2League of Legends သို့ Valve ၏တုံ့ပြန်မှုသည် ၅ နှင့် ၅ ကိုယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်အခြားကစားသမားများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ခေါင်းစဉ်ကို ဦး တည်သည်။
Warcraft, Diablo, Starcraft နှင့်အခြား Blizzard ကဲ့သို့ခေါင်းစဉ်များကိုချစ်မြတ်နိုးသောသူများသည် 5v5 စစ်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အထူးစိတ်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်။ AI နှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
ဤခေါင်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည် လှည့်ရန်သူရဲကောင်း ၈၀ ကျော်မင်းတကယ်ကြိုက်တဲ့သူကိုတွေ့ရင်မင်းဂိမ်းထဲမှာငွေကြေး (သို့) microtransactions တွေကတဆင့်သူ့ဆီကိုအမြဲတမ်း ၀ ယ်နိုင်တယ်။
အခြားခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့ microtransactions များကျန်ရှိနေသေးသည် သူရဲကောင်းများ၏အနုအရင့်ကိုစိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရန်တန်းဆင်းသွားသည် ထို့ကြောင့်သင်ဂိမ်းကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားရန်သင်ဘာတစ်ခုမှပေးရန်မလိုပါ။
Dota2လိုအပ်သည် OS 10.9၊ Intel Dual-Core ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM4GB၊ NVIDIA GeForce 320M, Radeon HD 2400, Intel HD 3000 နှင့်အထက်၊ hard disk space 15 GB ရှိပြီး၎င်းမှတဆင့်သင် download နိုင်သည်။ ရနှေးငှေ့.
သင်ဆံပင်ဖြူများစတင်စုဆောင်းခဲ့လျှင်၊ သင်ကလေးကစားခဲ့သည်မှာဖြစ်နိုင်သည် ပို့ဆောင်ရေးသူဌေးကြီး Deluxe၁၉၉၅ တွင်ဈေးကွက်ကိုတိုက်ခိုက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြင်း simulation game တစ်ခုဖြစ်သည်။ Open TTD တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်ရထားများ၊ လေယာဉ်များ၊ ယာဉ်များနှင့်သင်္ဘောများဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာများသို့မဟုတ်လူများကို A မှအမှတ် B သို့အောင်မြင်စွာပို့ဆောင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုမည့်ဆုလာဘ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများတည်ဆောက်ပါဤခေါင်းစဉ်သည် ၁၉၅၀ မှ ၂၀၅၀ ကြားတွင်ဖြစ်သည်။
မူလ Open TTD နှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်aဖြစ်သည် ကစားသမား ၂၅၅ ယောက်အထိ online နှင့် local multiplayer ဂိမ်း, ၎င်းသည်၎င်းထက်အခြေတည်။ ပိုမိုအလိုလိုသိသော interface တစ်ခုထက်ပိုကြီးသောမြေပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ငါတို့ဒီဂိမ်းကိုလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ရနှေးငှေ့.
Wesnoth အတွက်တိုက်ပွဲသည် open source turn-based ဗျူဟာဂိမ်း ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကိုပြန်ရောက်စေမည့်ဆဋ္ဌဂံပုံစံဇယားကွက်၌တိုက်ပွဲများနှင့်အတူ။
Wesnoth အဘို့စစ်တိုက် single player campaign ၁၆ ခုနှင့် online multiplayer maps ၄၆ ခုပါ ၀ င်သည် ၎င်းတွင်ယူနစ် ၂၀၀ ကျော်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ ဂိမ်းသည်ပါဝင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ပါဝင်မှု၊ စွဲဆောင်မှုရှိသောကစားနည်းနှင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်တို့ကြောင့်ဒီဂိမ်းကိုပရိသတ်အများအပြားကတီထွင်ခဲ့သည်။
တစ်ဖန်ထိုအသိုင်းအဝိုင်းသည်ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်လှူဒါန်းသည် လှုံ့ဆော်မှုအသစ်များနှင့်အဖွဲ့ခွဲများမှအနုပညာလက်ရာများသို့မရ။ Battle for Wesnoth ကို download မှတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည် ရနှေးငှေ့.
ယင်းကြောင့် လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုအနည်းဆုံး OS 10.8, 2,0 GHz dual-core processor, RAM2GB, hard disk space 800 MB ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
Doki Doki စာပေကလပ်!
မင်းကပိုငြိမ်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုကြိုက်တယ်၊ နောက်ပြီး မင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုထိန်းချုပ်တယ် (ဤခေါင်းစဉ်ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်မရနိုင်ပါ) သင် Doki Doki စာပေကလပ်ကိုစမ်းကြည့်သင့်သည်။ မင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအတွက်ရှေ့ဆက်မဖတ်ဘဲနဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဆက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။
Doki Doki Literature Club သည်စာဖတ်အသင်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ ငါတို့ဒီစာဖတ်ကလပ်ကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့အဲဒါကိုဖန်တီးပေးတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုသိလာနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဂိမ်းကိုပိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှာရင်းမကြာခင် Doki Doki စာပေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ စာအုပ်တွေကတဆင့်ငါတို့အချစ်ကိုရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးမရ။ ဤခေါင်းစဉ်သည်ချိန်းတွေ့ခြင်း Simulator မှသင်မျှော်လင့်သည်ထက်များစွာကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးကာအကြိမ်ကြိမ်အခါခါနံရံကိုချိုးဖျက်သည်။
Doki Doki စာပေကလပ် မှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် ရနှေးငှေ့ y ဒါဟာလိုအပ်ပါတယ် OS 10.9, 1.8 GHz Dual Core Processor,4GB RAM, 350 MB of hard disk space ။
တစ်သံမဏိက Sky အောက်ဖက်
အကယ်၍ သင်သည်ကလေးတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Monkey Island, Indiana Jones နှင့်အခြားအရာများ၊ သံမဏိတိမ်လွှာတစ်ခုအောက်၌သရုပ်ဆောင်သည် ၎င်းသည်သင်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးလိမ့်မည်။
ရောဘတ်ဖို့စ်သည်ဤဇာတ်လမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်၊ ကြီးမားသောမြို့တစ်မြို့၌သောင်တင်နေသောအပြစ်မဲ့သူစိမ်းတစ်ယောက် အဖိနှိပ်ခံအရပ်သားများနေထိုင်ပြီးအထပ်မြင့်မျှော်စင်များတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်…အကျင့်ပျက်၊ လောဘကြီးပြီးကြွယ်ဝတဲ့မြေအောက်မှာရှိနေစဉ်ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးမှကာကွယ်ထားသည်။
Foster သည်ရှင်သန်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမည် …ပြန်ပေးဆွဲခံရသူ၏နောက်ကွယ်မှဆိုးဝါးသောအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်… ၁၉၉၄ တွင်စျေးကွက်တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည့်ဤခေါင်းစဉ်ကိုခံစားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုအနည်းဆုံး OS 1994, Intel Core 10.6.8 Duo နှင့် RAM2GB တို့ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။ ငါတို့ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ရနှေးငှေ့.
tank Blitz ၏ကမ္ဘာ့ဖလား
အကယ်စင်စစ်ငါတို့အားဖိတ်ခေါ်သောအခမဲ့ကစားနည်းဤ tank MMO ဂိမ်းကိုသင်ကြားဖူးသည် 7v7 တိုက်ပွဲများနှင့် 26 ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်အခြားလမ်းပိတ်ဆို့မှုများကိုတိုက်ပါမရ။ World of Tanks သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒဏ္legendaryာရီလာသံချပ်ကာယာဉ်အစီး ၃၀၀ ကျော်မှရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်၊ အများစုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
အခြားမည်သည့်အခမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့မဆိုအလှကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်သည် သူတို့ကနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုလို့မထင်ဘူး အခြားကစားသမားများထက်ငွေပိုသုံးစရာမလိုဘဲဤခေါင်းစဉ်ကိုသင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည်။
World of Tanks Blitz ကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အခမဲ့ download လုပ်ပါ ဖြတ်. ရနှေးငှေ့၎င်းကိုခံစားရန် macOS 10.9 နှင့်2GB RAM လိုအပ်သည်။
Brawlhalla သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် 2D အက်ရှင်တိုက်ခိုက်ရေးပလက်ဖောင်းဂိမ်း ၎င်းသည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုရရှိနိုင်သောပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သူတို့၏ iPhone, PlayStation, Xbox, iPad, Android စမတ်ဖုန်းများ (သို့) တက်ဘလက်များမှကစားနိုင်သောအခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားနိုင်သည်။
ဤခေါင်းစဉ်ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်ပြီး ၀ ယ်ယူမှုများသည်ဇာတ်ကောင်များ၏ဗေဒကိုသာသက်ရောက်မှုရှိသည် မည်သည့်အားသာချက်ကိုမှမပေးအပ်ဘဲလာ၊ ဒါကပေးဆပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။
အပတ်စဉ်တိုင်း၊ ငါတို့မှာကစားရန်သူရဲကောင်းများ၊ အမြဲရနိုင်သောသူရဲကောင်းများရှိသည် ဇာတ်ကောင်များ၏လည်ပတ်မှုပေါ် မူတည်၍ မလိုအပ်ဘဲ ယူရို ၂၀ အတွက် Brawlhalla မှတဆင့် download ရယူနိုင်ပါသည် ရနှေးငှေ့.
Brawlhalla လိုအပ်သည် OS 10.7 နှင့်2GB RAM ကိုအကြံပြုသော်လည်း OX 10.5 တွင်4GB RAM ကိုအသုံးပြုသည်။ ကစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။
Legends သည် Elder Scrolls saga မှဇာတ်ကောင်များ၊ ဆက်တင်များနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများကို ယူ၍ ၎င်းတို့ကိုအသွင်ပြောင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကတ်များဂိမ်းအတွင်းစုဆောင်း။ ကွန်ပျူတာနှင့်အွန်လိုင်းကစားသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်သုံးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ အခမဲ့ download လုပ်ပါ The Elder Scrolls: Legends မှတဆင့် ရနှေးငှေ့မရ။ OS X 10.8 နှင့်အထက်၊ Intel Core2Duo2GB RAM နှင့်အနည်းဆုံး 256 MB မှတ်ဉာဏ်ရှိသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုအပ်သည်။
တစ်ခါက macOS တွင်ဤဂိမ်းကိုခံစားရန်အခက်အခဲများ, Eve Online သည်သင် MMORPG ခေါင်းစဉ်များကြိုက်လျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Eve Online သည်ငါတို့ကစားနိုင်သော galactic-scale interplanetary sand-box ကိုသင်ပေးနိုင်သည် ကမ္ဘာသစ်များကိုစူးစမ်းပါ သူစိမ်းများ၊ ကုန်သွယ်မှုစတင်ပါ၊ သို့မဟုတ်အချို့အာကာသတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ဖမ်းမိပါစေ။
ငါတို့မစခင်ငါတို့လုပ်ရမယ် မတူညီသောလူမျိုးလေးမျိုးမှရွေးပါကုန်သွယ်ရေး၊ တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်မှုမျိုးစုံအပြင်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အာကာသထဲကို ဦး တည်သွားပြီးသင့်ရဲ့စွန့်စားမှုကိုစတင်ဖို့သင့်တော်တဲ့သင်္ဘောကိုရွေးရပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်းရဲ့စီးပွားရေးကကျယ်ပြန့်တယ်၊ မင်းအချိန်တွေအကုန်ရှာဖွေ၊ ကုန်သွယ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အာဏာရဖို့အမြဲတစေပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အဖွဲ့ခွဲတွေထဲကတစ်ခုကိုပူးပေါင်းနိုင်တယ်။
ဤခေါင်းစဉ်၏လိုအပ်ချက်များ သူတို့ကနည်းနည်းမြင့်တယ်မင်းမှာ Mac အဟောင်းရှိရင်ငါတို့က download လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ MMORPG ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ ရနှေးငှေ့.
သင်ပထမလူသေနတ်သမားဂိမ်းများကိုနှစ်သက်ပါက Fistful of Frags အခမဲ့ဂိမ်းကိုသင်ပေးရမည်။ Fistful of Frags သည် အနောက်ဘက်တော၌တည်၏ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စတို၊ ရိုင်ဖယ်များနှင့်သေနတ်များဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရမည်။
ကစားသမားများသည်ရနိုင်သောအမျိုးအစားလေးမျိုးအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Desperados, Vigilantes, Rangers နှင့် Banditos သူတို့က online game တိုင်းမှာပြိုင်တယ်။ ပွဲစဉ်တိုင်းတွင်တင်းကျပ်သော၊ အနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
မသန်စွမ်း Fistful of Frags ကို download လုပ်ပါ မင်းရပ်ရမယ် ရနှေးငှေ့မရ။ OS X 10.7, 1 GB RAM နှင့်ရိုးရှင်းသောဂရပ်ဖစ်ဖြင့်သင်သည်ကစားသူအများအပြားအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သောဤခေါင်းစဉ်ကိုခံစားနိုင်သည်။
Team Fortress2သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကာတွန်းပုံစံနှင့်အတူမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်မျှတသောအွန်လိုင်းသေနတ်သမားဖြစ်သည်။ Team Fortress2ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည် ၎င်းသည် multiplayer သာဖြစ်သည်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းကစားနိုင်သည်။
Es ရယ်စရာရယ်စရာတကယ့်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်ကောင်အမျိုးအစားများစွာပါဝင်ပါတယ်။ မင်းကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ဟာသဗေဒကိုကြိုက်ရင်မင်းဒီကတဆင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာမင်းမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်။ ရနှေးငှေ့ လုံးဝအခမဲ့။
Teeworlds ဂိမ်းကို Worms ဟုသတ်မှတ်နိုင်သော်လည်းလုံးဝအခမဲ့နှင့်၎င်းအဘယ်မှာရနိုင်သနည်း လူ ၁၆ ယောက်အထိကစားပါ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် open source ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားသူအသုံးပြုသူများကတီထွင်ခဲ့သည်။ In-game map editor ကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြေပုံတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်တယ်။
သငျသညျလိုလျှင် Worms ဂိမ်းတွေကိုပြန်သတိရပါTeeworlds ဖြင့်ဤ link မှတဆင့်သင်အခမဲ့ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည် ရနှေးငှေ့.
Mac App Store မှမထွက်ဘဲငါတို့ iOS version နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Basketmania ဂိမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ အစက်များကိုသုံးပါ လမ်းကြောင်းတစ်ခု၏အစကိုညှိပြီးဘောလုံးကိုပစ်ပါမရ။ ကောက်ရတာလွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပိုခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းလာတယ်။
ရေးသားသူ: NO2 ၀ က်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ SL
မင်းက Windows မှာငါတို့နဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာတွဲခဲ့တဲ့ဂန္ထဝင် solitaire ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းကစားချင်တယ်ဆိုရင်မင်းအတွက်ရနိုင်တဲ့ Full Deck Solitaire ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ download လုပ်ပါ Mac App Store တွင်ရှိသည်။
ရေးသားသူ: Kristanix ဂိမ်းများ
စူပါ Stickman ဂေါက်သီး 3
Super Stickman Golf3သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိ iOS App Store နှင့် Apple Arcade တို့တွင်တွေ့နိုင်သောတူညီသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဤဂေါက် Simulator သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်တန်းအသစ်များ၊ ပါဝါတက်ခြင်းများ၊ စုဆောင်းနိုင်သောကဒ်များ၊ ကစားသူအများအပြားအပါအ ၀ င်ကွဲပြားသောကစားနည်းများကိုပေးသည်။
ငါတို့သည်အပေါက် ၂၀ အထိအခမဲ့စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ငါတို့ကဂိမ်းတစ်ခုလုံးကို ၀ င်ခွင့်ရချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ငွေရှင်းကောင်တာကိုဖြတ်သွားရမယ်။ Super Stickman Golf 20 သည် macOS3နှင့်အထက်လိုအပ်သည်။
Super Stickman Golf ၃
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Mac ဂိမ်း ၂၀
Windows 10 တွင် HDMI အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ
အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှု PowerPoint တမ်းပလိတ်များ